हाम्रो गोपनीयता नीति - व्यवसायका लागि डिजिटल साइनेज र भिडियो वाल सफ्टवेयर
तपाईंको डाटा सुरक्षित छ
Virtual Cockpit UK LTD को लागी गोपनीयता नीति
ईजी मल्टि डिस्प्लेमा, www.easy-m Multi-display.com बाट पहुँचयोग्य, हाम्रो मुख्य प्राथमिकताहरू मध्ये एक हाम्रो आगन्तुकहरूको गोपनीयता हो। यस गोपनीयता नीति कागजातमा जानकारीका प्रकारहरू समावेश छन् जुन सजिलो मल्टि डिस्प्लेद्वारा संकलन र रेकर्ड गरिएको हुन्छ र हामी यसलाई कसरी प्रयोग गर्छौं।
यदि तपाईंसँग अतिरिक्त प्रश्नहरू छन् वा हाम्रो गोपनीयता नीतिको बारेमा बढि जानकारी आवश्यक छ भने, support@easy-multi-display.com मा ईमेल मार्फत हामीलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्।
यदि तपाइँ एक गोपनीयता नीति के हो जान्न चाहानुहुन्छ भने, तपाइँलाई सन्दर्भ गर्न सक्नुहुन्छ विकिपेडियाको लेख.
इजि मल्टि डिस्प्लेले लग फाइलहरू प्रयोग गर्ने मानक प्रक्रिया अनुसरण गर्दछ। यी फाईलहरू वेबसाइट भ्रमण गर्दा आगंतुकहरू लग गर्नुहोस्। सबै होस्टिंग कम्पनीहरूले यो गर्छन् र होस्टिंग सेवाहरूको विश्लेषकको एक अंश। लग फाइलहरूले स collected्कलन गरेको जानकारीमा इन्टरनेट प्रोटोकल (आईपी) ठेगानाहरू, ब्राउजर प्रकार, इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी), मिति र समय टिकट, सन्दर्भ / बाहिरिने पृष्ठहरू, र संभवतः क्लिकहरूको संख्या समावेश गर्दछ। यी कुनै पनि जानकारीसँग लिंक गरिएको छैन जुन व्यक्तिगत रूपमा पहिचान योग्य छ। जानकारीको उद्देश्य ट्रेंडहरूको विश्लेषण, साइट प्रशासन, वेबसाइटमा प्रयोगकर्ताहरूको आन्दोलन ट्र्याक गर्न, र डेमोग्राफिक जानकारी स gathering्कलन गर्नु हो।
कुकीहरू र वेब विकनहरूको
कुनै अन्य वेबसाइट जस्तै, सजिलो बहु प्रदर्शनले 'कुकीज' प्रयोग गर्दछ। यी कुकिजहरू आगंतुकको प्राथमिकताहरू, र वेबसाइटमा पृष्ठहरू जुन आगन्तुकले पहुँच गरेको वा भ्रमण गरेको भण्डार गर्दछ। जानकारी प्रयोगकर्ताहरूको अनुभव अनुकूलन गर्न प्रयोग गरिन्छ आगन्तुकहरूको ब्राउजर प्रकार र / वा अन्य जानकारीमा आधारित वेब पेज सामग्री अनुकूलित गरेर।
ईजी मल्टि डिस्प्लेको प्रत्येक विज्ञापन साझेदारहरूको लागि गोपनीयता नीति फेला पार्नको लागि तपाईं यो सूचीलाई परामर्श लिन सक्नुहुन्छ।
तेस्रो-पक्ष विज्ञापन सर्भर वा विज्ञापन नेटवर्कले प्रविधिहरू जस्तै कुकीहरू, जाभास्क्रिप्ट, वा वेब बिकनहरू प्रयोग गर्दछ जुन उनीहरूको सम्बन्धित विज्ञापनमा प्रयोग गरिन्छ र लि Easy्क जुन सजिलो मल्टि डिस्प्लेमा देखा पर्दछ, जुन प्रयोगकर्ताको ब्राउजरमा सिधा पठाइन्छ। यो स्वचालित रूपमा तपाइँको IP ठेगाना प्राप्त गर्दछ जब यो हुन्छ। यी टेक्नोलोजीहरू उनीहरूको विज्ञापन अभियानको प्रभावकारिता नाप्नको लागि प्रयोग गरिन्छ र / वा विज्ञापन सामग्री निजीकृत गर्न जुन तपाईले भ्रमण गर्नुभएको वेबसाइटहरूमा अवलोकन गर्नुहुन्छ। नोट गर्नुहोस् कि ईजी मल्टी डिस्प्लेको यी कुकीजहरूमा पहुँच वा नियन्त्रण छैन जुन तेस्रो-पार्टी विज्ञापनदाताहरू द्वारा प्रयोग गरिन्छ।
इजि मल्टि डिस्प्लेको गोपनीयता नीति अन्य विज्ञापनदाता वा वेबसाइटहरूमा लागू हुँदैन। यसैले, हामी तपाईंलाई अधिक विस्तृत जानकारीको लागि यी तेस्रो-पक्ष विज्ञापन सर्भरहरूको सम्बन्धित गोपनीयता नीतिहरू परामर्श गर्न सल्लाह दिइरहेका छौं। यसले उनीहरूका अभ्यासहरू र केही विकल्पहरूको अप्ट-आउट कसरी गर्ने बारे निर्देशनहरू समावेश गर्न सक्दछ। तपाइँ यहाँ गोपनीयता नीतिहरु र तिनीहरुको लिंकहरु को एक पूर्ण सूची पाउन सक्नुहुन्छ: गोपनीयता नीति लिंक। तपाईं आफ्नो व्यक्तिगत ब्राउजर विकल्पहरूको माध्यमबाट कुकिज असक्षम गर्न सक्नुहुन्छ। विशिष्ट वेब ब्राउजरहरूको साथ कुकी व्यवस्थापनको बारेमा विस्तृत जानकारी जान्नको लागि, यो ब्राउजरको सम्बन्धित वेबसाइटहरूमा फेला पार्न सकिन्छ। कुकीज के हो?
हाम्रो प्राथमिकताको अर्को पक्षले बच्चाहरूको लागि सुरक्षा थप्दै छ जब इन्टरनेट प्रयोग गरिरहन्छ। हामी अभिभावक र अभिभावकलाई निरीक्षण गर्न, भाग लिन, र / वा मनिटर गर्न र तिनीहरूको अनलाइन गतिविधि मार्गदर्शन गर्न प्रोत्साहित गर्दछौं। सजिलो मल्टि डिस्प्लेले जानाजानी १ 13 बर्ष भन्दा कम उमेरका बच्चाहरुबाट कुनै पनि व्यक्तिगत पहिचान योग्य जानकारी स collect्कलन गर्दैन। यदि तपाइँ तपाइँको बच्चाहरुले हाम्रो वेबसाइटमा यस प्रकारको जानकारी उपलब्ध गराउनु भएको सोच्नुहुन्छ भने हामी तपाइँलाई जोडतोडका साथ तुरुन्तै सम्पर्क गर्न प्रोत्साहन गर्छौं र हामी सक्दो प्रयास गर्नेछौं। तत्काल हाम्रो रेकर्डबाट त्यस्ता जानकारी हटाउनुहोस्।
यो गोपनीयता नीति हाम्रो अनलाइन गतिविधिहरूमा मात्र लागू हुन्छ र उनीहरूले साझा गरेको जानकारी / वा सजिलै बहु प्रदर्शनमा स shared्कलन गर्ने सम्बन्धमा हाम्रो वेबसाइटमा आगन्तुकहरूको लागि मान्य छ। यो नीति अफलाइन वा यस वेबसाइट बाहेक अरू च्यानल मार्फत संकलन गरिएको कुनै पनि जानकारीमा लागू हुँदैन।
हाम्रो वेबसाइट प्रयोग गरेर, तपाईंले हाम्रो गोपनीयता नीतिमा सहमति लिनु भएको छ र यसको सर्त र नियमहरूसँग सहमत हुनुहुन्छ।
कुनै अन्य प्रश्नहरू?
यदि तपाईंसँग अझै पनि सजिलो बहु प्रदर्शन गोपनीयता नीति बारे प्रश्नहरू छन् भने कृपया हाम्रो ग्राहक सेवामा सम्पर्क गर्नुहोस् समर्थन@easy-m Multi-display.com। हामी तपाईंलाई सहयोग गर्न खुसी हुनेछौं!
यदि तपाईं हाम्रो ईजी मल्टि डिस्प्ले सफ्टवेयरमा रुचि राख्नुहुन्छ भने, क्लिक गर्नुहोस् यहाँ हाम्रो नि: शुल्क परीक्षण संस्करण डाउनलोड गर्न।
हाम्रो कम्पनी विवरण
भर्चुअल ककपिट युके लिमिटेड शेयरहरू द्वारा
कम्पनी दर्ता नम्बर: १००10062777
भ्याट नम्बर: २289 8124 50१२XNUMX .०
निर्देशक: केटा कन्डमाइन, gco@virtual-cockpit.com
-१-71 शेल्टन स्ट्रीट, कभेन्ट गार्डेन, लन्डन WC75H2JQ